Ahoana no hanatsarako ny fivezivezena amin'ny bisikileta? - Valiny Tsara Indrindra
Tena > Valiny Tsara Indrindra > Torohevitra momba ny bisikileta bisikileta - vahaolana maharitra
Torohevitra momba ny bisikileta bisikileta - vahaolana maharitra
Ahoana no hanatsarako ny fivezivezena amin'ny bisikileta?
Fomba 5 hanaovanamanatsaraNy bisikiletanao marainaniraharaha
Mandrisika ny tenanao. Mampatsiahy ny tenanao ny antony nanapahanao hevitraniraharahanybisikiletaamin'ny voalohany dia mety ho andry afovoany aofanatsaranany dianao.
Raiso ny làlan'ny Scenic.
Na zazavavikely ianao, na mandeha bisikileta, na efa tranainy amin'ny toetrandro maty tokoa, dia mendrika foana ny mieritreritra fomba hanamorana ny fivezivezena, tsy dia misy fihenjanana, ary hahafinaritra kokoa amin'ny ankapobeny ary miaraka amina fandrosoana kely. fandaminana sy fanomanana am-pitandremana Azonao atao izany mba hahazoana antoka fa miasa ianao mijery vola mitentina tapitrisa dolara vaovao ary maimbo toy ny bacon tsara. Amin'ity lahatsoratra ity dia manome anao torohevitra be dia be izahay momba ny fomba mahafinaritra kokoa amin'ny fivezivezena sy ny fofon-cookies, ankoatry ny zavatra hafa, fa alohan'ny hanaovanay izany dia manao fanadihadiana haingana amin'ny fampiharana izahay mba hahitana hoe firy aminareo no tena miverina, koa mankanesa aminay Click-on-Screen dia hitari-dàlana anao aho amin'ny alàlan'ny fanadihadiana ary ataonao izany izao alao sary an-tsaina aloha ny fisehoan-javatra amin'ny alatsinainy dia reraky ianao angamba somary misimisy satria tsy maintsy mandeha miasa ianao, fa mahita bisikileta ianao, ianao efa nandresy, fa miandry alohan'ny handaozana ny trano dia alao antoka fa manangona kitapo feno akanjo madio izay ilainao mandritra ny herinandro sisa fiasana amin'ity fomba ity ianao dia tsy mila mitondra kitapo lehibe handeha hiasa. mandritra ny herinandro sisa ary manaova fitafiana madio atoandro dia ato ny kitapoko izay manana ny akanjo ilaiko amin'ity herinandro ity any amin'ny birao, ka nitondra T-shirt GGN aho, ba kiraro club club GCN ary pataloha roa, ireto eto amin'ny GCN dia zavatra sarotra iray satria mety hitanao fa be dia be izahay no mivezivezy eto amin'ny bisikileta ary midika ady izany fa ny toerana fandroana dia matetika mety ho ady isan'andro raha tsara vintana ianao amin'ny fiasana amin'ny toerana misy fandroana rano any izay afaka manampy anao tsy ho ela dia azonao atao ny mieritreritra ny hiasa kely na ho ela na ho haingana mba tsy ho hitanao ny maika ora be dia be tokoa aho dia ho feno fankasitrahana fa namelombelona ianao ary rehefa tsy manana toeram-pandroana ny toeram-piasanao dia misy safidy maro hafa, angamba misy gym eo akaikin'ny toeram-piasanao ary azonao atao ny mampiasa ny fomba hitondranao ny hafatra mody Miaraka aminao handro raha tsy hoe antisocial ianao ary tahaka ilay hevitra manana birao iray ho anao, tsy fantatrao mihitsy hoe rahoviana no mila jiro, rehefa mandeha miasa ianao ary rehefa mandeha amin'ny lalana be olona dia tena mamporisika anao izahay hampiasa jiro mandeha antoandro satria tena misy dikany izany, fa indraindray misy fahatarana sy fanemorana izay midika fa na dia tsy manantena ny hitondra fiara ao amin'ny maizina aza ianao dia afaka manao izay vitanao ihany amin'ny farany, ka miomàna foana, angamba manana jiro vonjy maika ianao any am-piasana ary raha mandeha ianao amin'ny ririnina, izay maizina matetika, dia ilaina ny mameno ny zanakao maivana vantany vao tonga any amin'ny birao izay tsy mitondra fiara amin'ny maizina ianao ary avy eo mahita fa maty tokoa ny baterinao, vahaolana iray hafa mety hampiasaina ny dinamo mifamatotra amin'ny bisikiletanao izay afaka mameno ny jironao mandritra izao dianao izao, misy tombony sy fatiantoka maromaro amin'izany Fampiasana dinamosa izay tsy dia ilaina loatra izany, nefa raha tsy ianao dia tsy azoko antoka. , nanao lahatsoratra manazava fotsiny izahay, i Saingy amin'izao fotoana izao dia mety tokony holazaiko fa tsy tena mandeha amin'ny Pinarello Dogma f12 misy kodiarana Vision 81 milimetatra lalina aho, izay hampihomehy, satria tsy oligarka aho, be ny bisikiletako sy ny mycommute dia mandeha dimy minitra amin'izao fotoana izao fa raha tsy anoligar na sultan ianao izay sendra mandeha bisikileta ary afaka mamadika ireo singa ambony indrindra ao an-toerana fototra mahazatra, azo ampiharina kokoa noho ianao manana com milalao bisikileta, satria ny bisikileta komuter dia ampijalina matetika amin'ny fiainana satria midika izany fa mety tsy afaka diovinao matetika araka izay itiavanao azy ary fantatrao fa manana vintana tsara mitaingina vanim-potoana ianao ary indraindray dia iharan'ny fanararaotana be amin'ny loto lalana, izy ireo dia workhorse ary ireo karazana toe-javatra ireo dia afaka hanafainganana ireo singa, noho izany antony izany, ny fisafidianana ireo singa tsy dia lafo dia safidy tsara kokoa raha manao izay lazaiko fa tsy ny fomba fanaovako azy dia ho hafa ho an'ny tsirairay izany ary miankina amin'ny toerana misy ny fiarahamonina misy anao sy ny faharetan'ny dia ataonao izao. Betsaka ny làlambe mangina sy arabe kely eto ary afaka mitaingina làlana tsara ianao, saingy nipetraka tany Londres aho ary nandeha bisikileta, izay tantara hafa mihitsy.
Fampiofanana kaloria 3500
Vokatr'izany dia tsy maintsy tena nahay namolavola làlana marani-tsaina sy lehibe aho, nanalavitra ny fitondrana fiara amin'ny làlambe sy ny làlambe sns. Ankehitriny dia misy fomba maro isan-karazany anaovana azy eto ny GCN ampiasainay ny commutecommute dia fampiharana iray izay tena ilaina amin'ny fanaovana zotram-pifandraisana ary manana fitaovana lehibe izy io izay afaka manampy anao hisafidy lalana mangina kokoa any izay mety kokoa amin'ny bisikileta, ary koa ho an'ny hafa terrains. Ka angamba tianao ny làlana izay ny haavon'ny haavo ambany indrindra azo atao, na mety tianao ny hahatratra ny haavon'ny avo indrindra azo atao, ny arabe samy hafa ihany koa, mba hahafahan'izy ireo mitoka-monina amin'ireo lalana tsy lavitra na misy vatokely raha toa ka maniry mifangaro ianao eny an-dalana, ary raha mety ho tsara vintana ianao fa manana karazana bisikileta mihoatra ny iray ihany, dia mety manana mpandeha manokana sy mpandeha eny an-dalana ianao.
Street vs Off-Road Commuting tamin'ny herintaona Rehefa sahirana amin'ny antony manosika ny asa ianao ary maninona raha mandeha mitaingina olona, ​​manontania any am-piasana ary jereo hoe iza koa no mandeha bisikileta, na dia antsasaky ny andalany fotsiny aza no ahatongavanao aminy. dia satria ny fitondrana fiara miaraka amin'ny olon-kafa dia manome anao antony manosika fanampiny, tanjona ny hanenjehan'ny olona iray olona azonao zakaina ary ny olon-kafa matoky anao fa tena hiseho sy hitondra ny bisikiletanao, etsy andaniny raha veterana fetsy ianao ny fiovana? miaraka amina bisikileta ary fantatrao fa any am-piasana izay somary tsy milamin-tsaina, somary mitebiteby ary maniry orinasa iray ary mety hahazo tombony amin'izany, dia fantatrao hoe maninona ianao no tsy afaka manome tanana azy ireo ary manampy azy ireo hiverina am-pitokisana mendrika hi Dan yeah tadidio eny amboary ny patalohanao mandritra ny herinandro sisa dia nofonosiko ny ahy eny eny mahafinaritra fa ho hita eo ianao rehefa avy eo maninona rehefa miverina backpack ianao dia mety ho ok indraindray mety ho ok amin'ny làlana fohy kokoa fa amin'ny fe-potoana lava kokoa dia mety mahazo aina sy azon'izy ireo atao ny manasatra anao kely ary na dia mandritra ny diany 20 minitra aza dia afaka manomboka somary manelingelina izy ireo, saingy misy safidy hafa, azonao atao ny mampiasa paisara na pataloha. Tena manoro hevitra aho ny hanao an'io, ny tiako holazaina dia toy ny akanjo i Penny izay miditra sy mivoaka amin'ny bisikileta mahazatra, fa na eo aza izany dia azo ampiharina sy mahasoa tokoa ary rehefa esorina amin'ny vatana sy amin'ny bisikileta ilay lanja tena fanamaivanana ho anao fotsiny, hahatsapa ho mahazo aina kokoa ianao mitaingina azy indrindra raha ianao no handeha lavitra kokoa aho, ireto no torohevitra nomenay, fa tsarovy fa raha mandeha bisikileta ianao dia ankafizo fa tsy voatery. manaova hazakazaka, ankafizo ny fotoanao amin'ny bisikileta fa manampy anao ho salama kokoa ary hamonjy ny planeta, bonus ary raha manana ny hacks sy ny toro-hevitra tianao hizara ianao dia alefaso amin'ny fanehoan-kevitra satria tianay ny maheno anao ary izay azonao ampidirina amin'ny lahatsoratra ho avy ary manantena aho fa ny olona rehetra ao amin'ny fanehoan-kevitra dia tsy momba ny patalohako na ny voloko fotsiny, tsara izany fa handeha aho izao satria tsy maintsy mandeha mody aho, ka apetrako eo amin'ny boaty GCN , izay misy ao amin'ny fivarotana gcn
Inona no ilaiko amin'ny fivezivezena amin'ny bisikileta?
Mpitety bisikiletalisitra kit
Bisikileta. Safidy tsara eto ny drafitra Cycle to Work, ahafahanao manombokabisikiletamahitsy tsy misy vidiny mialoha.
Jiro. Na dia lisitra teti-bola ity dia tsy zavatra anao ny jirotemanara-maso.
Mpiambina ny fotaka.
Racksack / panniers.
Inona no atao hoe mandeha amin'ny alàlan'ny bisikileta?
Noho izany, hamaliana ny fanontaniana hoe hatraiza ny halaviranabisikiletamiasa? Mila milaza aho fa miankina aminao indrindra izany, saingy 10 na 20 kilaometatra no toa aantononylavitra lavitra noho izany ary manomboka be loatra izany. Saingy misy hatrany ny fanilikilihana ny lalàna, ary ny fiomanana dia afaka manampy.
Ity dia ny fiverenako maraina. Mitsangana aho, miomana, miditra anaty fiara, mitondra fiara mankany amin'ny gara, mitady toerana hipetrahana, mitaingina lamasinina mandritra ny adiny iray sy sasany, miakatra amin'ny Penn Station, mitaingina lamasinina iray hafa, mandeha dimy minitra, ary atombohy ny andro fiasako alohan'ny hamoahanao ity hevitra ity izay mangataka ahy hanakaiky kokoa, tokony ho fantatrao fa tsy izaho irery no manao an'io. Ity ny gara misy ahy.
Goavana io toerana io nefa feno olona saika isan'andro. Tamin'ny fararano lasa teo dia tsy maintsy nanongotra faritra iray manontolo tamin'ny hazo izy ireo mba hanaovana toerana hipetrahana bebe kokoa, ary mbola tsy ampy izany. Araka ny filazan'ny U.
S. Census, ny salanisan'ny fivezivezena amerikana dia efa ho 30 minitra avy, isa izay nitombo nandritra ny am-polony taona vitsivitsy lasa izay. Amin'ny ankapobeny, ny olona misafidy ny handeha lavitra kokoa noho ny taloha.
Ary ireo ora lava mandreraka ao anaty fiara, lamasinina na bisy ireo dia mety hanimba ny fahasalaman'ny olona iray. Indrindra rehefa mankahala azy be dia be isika rehetra. Raha efa niasa ianao, na koa teo amin'ny Internet, dia nahita ny lahatsoratra ary angamba namaky ny fandalinana.
fox mtb taitra
Ny fifanakalozana dia mifandraika amin'ny taha ambony amin'ny matavy loatra, ny adin-tsaina, ny fanahiana, ny famoizam-po, ny tosidra ambony, ny isan'ny fisaraham-panambadiana, ny hatoka sy ny lamosina, ny androm-piainana fohy kokoa, ary azonao izany. Tsy tsara aminao ny mandeha lavitra. Fa miankina betsaka amin'ny fomba anaovanao azy izany.
Ohatra, ny fandalinana komuter kanadianina iray tao Montreal dia nahitana fa ny olona mandeha an-tongotra, bisikileta na mitaingina lamasinina dia manana fahafaham-po amin'ny fiainana ambony kokoa noho ny olona manana fotoana fandehanana mitaha amin'ny fomba fitaterana hafa. Tamin'ny fanadihadiana iray hafa dia hitan'ny mpikaroka britanika fa ny olona mandeha miasa fa tsy mampiasa fitateram-bahoaka dia mety ho be loatra. Ny fipetrahana anaty fiara mandritra ny andro dia tena manampy ny voka-dratsy ateraky ny fomba fiainana tsy mihetsika.
Mipetraka mandritra ny ora maro ianao ary rehefa vita ny zavatra rehetra dia sarotra be ny mahita fotoana na antony manatanjaka tena. Ary tsy izany ihany. Nasehon'ny fikarohana fa ny mitondra fiara irery dia mety hahatonga anao hijaly kokoa.
Ianao irery no mieritreritra mandritra ny ora maro, matetika amin'ny toe-javatra mahasosotra, noho izany tsy dia mahagaga raha izany no loza amin'ny fahasalamanao ara-tsaina sy ara-batana. Saingy, hoy ny tatitra tamin'ny 2010, 80% ny Amerikanina no miasa miasa isan'andro. Raha ampitahaina, ireo izay mampiasa fitateram-bahoaka dia salama kely ary somary sambatra amin'ny fiainana.
Na eo aza izany, dia mazàna manombatombana ny zavatra niainantsika amin'ny ankapobeny ratsy kokoa isika. Matetika ny mpandeha amin'ny besinimaro dia sosotra amin'ny fandaharam-potoana. Raha tsy mamela ny asako ara-potoana amin'ny 6 ora aho dia tsy ho tonga amin'ny 6:21 maraina.
crater farihy crater 2015
Raha tsy mahatratra 6:21 aho dia tsy maintsy mandroso amin'ny 6:53 hariva, ary izany no mahasamihafa ny mody amin'ny 8:00 alina. ary hody aho amin'ny 8:45.
Manampia zavatra toy ny famindrana, fanemorana, fanafoanana ary manana fototra mafy orina ianao ho an'ny fivezivezena mampiady saina sy manelingelina be. Amin'ny ankapobeny, tsy misy na dia iray amin'ireo aza no tsara ho an'ny fahafatesako. Ka maninona no maro amintsika no manao izany? Ny fivezivezena dia hita fa loharanon'ny fihenjanana, saingy manome fialan-tsasatra ho an'ny olona izany.
Indraindray dia io no ora iray monja amin'ny ananan'ny olona irery irery, mieritreritra, mihaino mozika. Izany dia nilaza fa ny toerana fandehanako dia tsy toerana maty ara-teknika tamin'ny androko. Mamaky aho, mihaino podcast, mampiasa irery ny fotoana aho, nefa afaka miasa ihany koa raha ilaina.
Ny fiovana teo amin'ny fifandraisana dia nahatonga ny fivelaran'ny andro fiasana na fotoana ahafahan'ny olona manao zavatra izay tsy vitan'izy ireo akory. Tsy ny fivezivezena fotsiny avy amin'ny A ka hatramin'ny B. Amin'ny tranga hafa iainan'ny olona amin'ny toekarena gig, ny fananana trano mety dia zava-dehibe kokoa noho ny manana trano akaikin'ny toerana iasanao.
Raha tsy manana asa maharitra ianao dia andao mody mandritra ny androm-piainana. Ka mamono ahy tokoa ve ny fivezivezena ataoko? Eny, azo antoka fa tsy izany no fomba tsara indrindra handaniana io fotoana be io, ary mandreraka, fa azonao atao tsara ny mampiasa azy io. Ary misy zavatra holazaina rehefa mody any amin'ny farany ianao
Ampy ve ny fanatanjahan-tena amin'ny bisikileta?
Ny antsasaky ny olon-dehibe ihany no mihaona aerobikaFANAZARAN-TENAtorolàlana, fa 30 minitrabisikiletamitaingina (15 minitra isaky ny mandeha) dimy andro isan-kerinandro amin'ny hafainganam-pandehaampymba hahatratrarana ireo tolo-kevitra ireo. Ny bisikileta koa dia misy tombony lehibe ho an'ny fahasalamana ara-tsaina sy fahasalamana.13 2019.
Andro 20 tsara ve ny bisikileta?
Aza manahy ny amin'ny lanja very amin'ny faha-14 taonanao. Hihatsara endrika ianao raha mazoto miasamitaingina bisikiletana fanatanjahan-tena hafa. Toy izany koa ny anao20KM isan'andromitaingina tsy manelingelina ny lanja ho laninao. Mihinana tsara miarakatsarahabetsahan'ny fibre, tavy amin'ny sakafo ary proteinina.
Amin'ny fifamoivoizana dia mety1-ora-ary-15 minitra.Commuteslava mihoatra ny 45 minitra dia miakatra 12 isan-jato amin'izany fe-potoana izany, ary 90-minitrairay-waycommutesdia 64 isan-jato no fahita kokoa noho ny tamin'ny 1990. Arakaraka ny faharetan'ny anaoniraharaha, ny fotoana kely anananao ho an'ny fianakavianao, ny namanao, ny fanatanjahan-tena ary ny sakafo mahavelona ary mahatsiravina izany amin'ny toe-tsainao.
Ratsy ve ny bisikileta isan'andro?
Bisikileta isan'androtsara rehefa vita amin'ny haavon'ny haavo mety sy raha manana fotoana ampy hiarenana ny vatanao. Ireo mpitaingina bisikileta mifaninana dia mila andro fanarenana noho ny hamafin'ny fiofanana sy ny hazakazany, ary ny bisikileta mahazatra kosa dia afaka bisikileta nefa tsy maka andro tsy fiasana.
Inona no may mandehandeha na mandeha bisikileta?
Mandeha bebe kokoa ny bisikiletakaloria
Ny salanisaMANDEHAhafainganam-pandeha 5 km / h (3 mph) mahatonga ny olona antononyhandoromanodidina ny 232 kcal isan'ora.Bisikiletaamin'ny hafainganam-pandeha 20 km / h (12 mph)maymanodidina ny 563 kcal isan'ora. Ary ny fahasamihafana dia lehibe kokoa aza rehefa ampitombointsika ny hamafiny.
Tsara kokoa ve ny mandeha an-tongotra na mandeha bisikileta?
Ratsy ho an'ny baolinao ve ny bisikileta?
Simba ny testiso avy amin'nybisikiletamazàna dia vokatry ny lasely tsy ampy (tsybisikiletatenany). Vokatr'izany dia mihatra ny tsindry tsy tapakanynerveux pudendal (ny hozatra voalohany hita aonytaint), izay mety hiteraka fanaintainana, tsy fahazoana aina na fahatsentsenan'ny taovam-pananahana (aka, voanjo numb).roapolo. 2020.
Ahoana ny fomba hiomanana amin'ny dianao bisikileta voalohany?
Raiso ny fitafianao hiasa ny andro alohan'ny handehananao. Raha mikasa ny hiova amin'ny akanjo bisikileta mankany amin'ny akanjo miasa ianao rehefa mivezivezy dia ento miasa ny akanjo ampitso alohan'ny dianao. 12. Ataovy stratejika ny fotoana fanadiovana alohan'ny hiasana. Ny mpandeha sasany dia mila fandroana feno alohan'ny hipetrahana eo akaikin'ny mpiara-miasa aminy.
Iza no bisikileta tsara indrindra tokony handeha hiasa?
Feno amin'ny milina komuter dia mety misy kodiarana hub sy jiro dynamo - nohazoninay ny sasany amin'ireo fomba bisikileta tsara indrindra amin'ny fivezivezena eto. Ny fahatsapana milentika ao an-davaka ao an-kibonao izay tonga amin'ny fahatsapana fa ny bisikiletanao dia tsy teo amin'ny namelanao azy tamin'ny faran'ny andro dia tsy irinay rehetra.
Mila manao pataloha fohy ve ianao rehefa mandeha bisikileta?
Raha mihoatra ny 20 na 30 minitra ny fivezanao, dia mety hahazo aina kokoa ianao amin'ny kilaoty fohy. Ny bisikileta mandeha bisikileta dia manafoana izany fihaonan-kofehy mihaona eo amin'ny toerana ipetrahanao amin'ny seza bisikileta izany. Ny tsindry sy ny fikorontanana dia mety hahatonga ity faritra ity tsy hahazo aina mihitsy rehefa mandeha lavitra ny bisikileta.